Maxaa laga filankaraa kulanka Trump iyo Putin? Warbixin) – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maxaa laga filankaraa kulanka Trump iyo Putin? Warbixin)
Kulan siyaasadeed oo aad loo hadal haayo una dhexeeya Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin, lafilayaa in dhawaan uu qabsoomo,kaasi oo noqonaya kulankoodii ugu horreeyey oo rasmi ah,waxaana ay 16-ka July ku yeelan doonan magaalada Helsinki ee caasimadda wadanka Finland.
Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii la-taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton uu la kulmay saraakiil sare oo ka tirsan Xukuumadda Moscow uuna ugfu horeeyo madaxweynaha Ruushka Putin, si loogu gogol xaaro kulanka.
la-taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton oo kulankaasi ka hadlay ayaa yiri“Madaxweyne Trump ayaa I weydiistay inaan imaado oo aan mas’uuliyiinta Ruushka kala hadlo kulanka labada madaxweyne” ayuu yiri Bolton oo weriyayaasha kula hadlay Moscow.
Wuxuu hadalkiisa ku daray in ay jiraan waxyaabo badan oo labada hoggaamiye ay isla xalin karaan,balse waxaa uu qiray in ay jaraan waxyaabo la isku maan dhaafsan yahaya.
Kulanka ayaa ay xaqiiq tahay inuu sare usii qaadi doono isha sida goonida ah loogu hayo xiriirka Aqalka Cad uu la leeyahay dowladda Ruushka, ayada oo uu socdo baaritaan lagu hayo xiriir dhex maray ololihii doorashada Trump iyo saraakiil xiriir la leh Kremlin-ka.
Mareykanka iyo Ruushka oo kamid ah wadamada Codka Vetoga ku leh Golaha Ammaanka ee QM ayaa waxaa ay u muuqdaan kuwo siyaasad ahaan aad isaga soo horjeeda,taasi oo ah khadiyad soo jireen ah,kulankan ayaana noqonaya kii ugu horeeyay ee dhexmara labada dhinac.
Sawirro:-Guddiga qaban qaabada maalmaha xorriyadda oo bilaabay Shaqooyinkooda